Ukuhlolwa kweNtsebenzo yesondo ngoBantu - iSiseko soMvuzo
Ikhaya Uvavanyo lweZenzo zoSondo ngoBantu
Ngaba wena okanye umntu osondelene nawe unenkinga ngeefostile? Eli candelo linikeza uvavanyo lokusebenza ngokwesondo olulula. Inokukunceda amadoda ukuba abone ukuba okanye i-intanethi ye-intanethi iyinxalenye ebalulekileyo yeengxaki zentsebenzo yesondo abanokuba nazo.
Uvavanyo lwentsebenzo yamadoda
Olu luvavanyo olulula olwenzayo umntu ukuba ukhangele ukuba i-porno ihambelana nengxaki yokusebenza ngokwesondo. Yayilungiswa nguGary Wilson ukunceda amadoda ukuba aqinisekise ukuba umsebenzi wabo wesondo odibeneyo uhambelana nokusetyenziswa kwezilwanyana okanye iziqu esikhundleni sokuxhalaba komsebenzi.
1. Okokuqala, bona i-urologist efanelekileyo kwaye ulawule naluphi na uhlobo oluqhelekileyo lwezokwelapha.
2. Emva koko, ngesinye isihlandlo ukuphulula amaphambili kwi-porn oyithandayo (okanye khawufane ucinge ukuba bekunjani ukuba ubuyifungile).
3. Emva koko, ngesinye isihlandlo senza i-masturbate engenabononopopayi kwaye ingenakucingela malunga noonopopayi.
Thelekisa umgangatho wezohlomelo zakho kunye nexesha elithathileyo ekugqibeleni (ukuba unokwenza isigxina). Umfana osempilweni akufanele abe neengxaki zokufumana ulungelelwano olupheleleyo kunye nokukrhoxela kwi-orgasm ngaphandle koononophelo okanye imfesane ye-porn.
Ukuba unesiseko esinamandla kwi-#2, kodwa u-erectile ukungasebenzi kwi #3, mhlawumbi unokuba ne-Porn-Kucucile ukungasebenzi kwe-Erectile (PIED). Udinga ukuyeka ukusebenzisa i-intanethi ye-intanethi. I-Foundation Foundation imodeli yokubuyiswa kwamanyathelo amathathu kucetyiswa.
Ukuba i-#3 iqinile kwaye iqinile, kodwa unenkxalabo kunye neqabane langempela, mhlawumbi unokuba ne-ED echaphazelekayo.
Ukuba unengxaki ngexesha le-#2 kunye ne-#3, unokuba ne-E-Porn-Ekhutshwe ngu-ED okanye i-problem-belt ingxaki apho uya kufuna uncedo lwezokwelapha.